people Nepal » पोर्नस्टारको भिडियोले किन तहल्का मच्यायो ? पोर्नस्टारको भिडियोले किन तहल्का मच्यायो ? – people Nepal
पोर्नस्टारको भिडियोले किन तहल्का मच्यायो ?
पोर्नस्टार मिया खलिफा, जो शोसल मीडियामा सक्रिय छिन्, उनले हालै एक भिडियो अपलोड गरेकी छिन् । इन्स्टाग्राममा शेयर गरेको उनको भिडियो रातारात भाइरल भएको छ । भिडियो राखेको एक दिनमै त्यसलाई अढाई लाखले हेरेका छन् ।
भिडियो खासै गतिलो छैन । उनी एक जिमखानाको बाहिर बसेर आइसक्रिम चाटिरहेकी देखिन्छ । तर, यो भिडियो उनले इन्स्टाग्राममा शेयर गर्नसाथ त्यसको भ्युअर्स अचम्मलाग्दो गरी बढ्यो । एक दिनमै लाखौंले हेरे । हजारौंले प्रतिक्रिया लेखे ।
त्यसो त उनी सोसल मीडिया निकै लोकप्रिय छिन् । उनलाई इन्स्टाग्राममा १० लाख बढीले पच्छ्याएका छन् । उनी सोसल मीडिामा हट फोटो शेयर गर्छिन् । उनी फ्लोरिडामा बस्छिन् । उनले फेब्रुअरी २०११ मा एक अमेरिकी युवासँग विवाह गरेका थिए ।
मियाले २०१४ बाट पोर्न उद्योगमा पाइला राखेकी हुन् । यसअघि उनी एक रेष्टुरेन्टमा काम गर्थिन् । उनी हिन्दी रियलिटी शो ‘बिग बोस’मा आउने कुराले निकै तहल्का पिटेको थियो ।
– मिया लेबनानमा जन्मिएकी हुन् । पछि उनी परिवार सहित अमेरिका बसाइ सरेकी थिइन् ।
– अमेरिकामा उनी स्थानिय फास्ट फूडमा काम गर्थिन् । त्यही बेला एक ग्राहले उनलाई पोर्न उद्योगमा काम गर्नका लागि अफर गरेका थिए ।
– उनले २०१४ मा पोर्न उद्योगमा पाइला राखिन् । २८ डिसेम्बरमा पोर्नहबले मियालाई नम्बर एक पोर्न अभिनेत्रीको सूचीमा राख्यो ।
– लेबनानी भएकाले नाताले उनले सुरुमा केहि विवादको सामना गर्नुपर्‍यो ।
– मिया लेवनानमा वस्दैनन् । तर, उनको हातमा लेवनानको नामको ट्याटु खोपाएकी छिन् । यसले उनले आफ्नो देशको नाम दुरुपयोग गरेका आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
– १८ बर्षको उमेरमा उनले एक अमेरिकी युवासँग विवाह गरेकी थिइन् ।
– जब उनी पोर्न उद्योगमा प्रवेश गरिन्, अभिभावकसँगको सम्बन्ध टुट्यो । उनले भन्थिन्, ‘म यो उद्योगमा आएपछि बुवाआमा बोल्न छाडे ।’